OpenTomb, Tomb Raider maimaim-poana ho an'ny Ubuntu | Ubunlog
OpenTomb, Tomb Raider maimaim-poana ho an'ny Ubuntu
Joaquin Garcia | | Games, Ubuntu
Herintaona lasa izay dia nianatra momba ny fisian'ny Tomb Raider sy Lara Croft ho an'ny Ubuntu izahay. Izany dia tratra noho ny sehatra Steam, sehatra iray izay nahatonga ny lalao video maro hahatratra ny Ubuntu.
Na izany aza, mpamorona lalao video dia mahavita zavatra lehibe eo amin'ny sehatry ny lalao video ho an'i Ubuntu. Araka izany, tato ho ato dia nambara izy io ny fisian'ny fork maimaim-poana an'ny Tomb Raider. Ity lalao video ity dia antsoina hoe OpenTomb.
OpenTomb dia lalao video maimaim-poana izay azontsika sintonina sy ampiasain'ny Ubuntu na sehatra Gnu / Linux hafa. Ny lalao video dia mampiasa motera azy manokana izay dia nahazo ampahany sy kaody avy amin'ny motera hafa saingy nanandrana nanao ny zava-drehetra toy ny lalao video Tomb Raider sy Lara Croft, izay ahafahantsika milalao scenario mitovy amin'izay nahasarika ireo tia lalao traikefa nahafinaritra taona maro lasa izay.
Na izany aza, OpenTomb dia hanana singa vaovao ary fitaovana vaovao antsoina hoe OpenTomb Level Editor, fitaovana iray ahafahantsika mamorona ny haavontsika manokana ary mizara azy ireo amin'ny mpilalao hafa.
OpenTomb na eo aza ny tsy fitovizany amin'ny lalao video tany am-boalohany, ny fametrahana azy dia tsy dia samy hafa be. Bebe kokoa, Mba hametrahana sy hilalaovana ity lalao video ity dia mila lalao video tany am-boalohany ny mpampiasa mba hiasa.. Toy ny kilasika maro hafa, ny licence amin'ny lalao video Tomb Raider voalohany dia tsy zon'ny mpamorona intsony ary afaka maka tahaka.
Izany dia mahatonga ny mpamorona maro hanararaotra ny lalao video tany am-boalohany ho an'ny fametrahana amin'ny Ubuntu. Tsy OpenTomb ny tranga voalohany, efa fantatsika tamin'izany ny kinova mitovy amin'ny lalao toa an'i Kaisaria III, mpiambina tranomaizina na Age Of Empires. Andininy izay tsy tiako manokana fa azon'ireo mpampiasa gamer be ampiasaina indrindra. Na izany na tsy izany, raha manana lalao Tomb Raider tany am-boalohany ianao ary te hanandrana OpenTomb, amin'ity github repository Ho hitanao ireo rakitra ilaina sy ny dingana fametrahana ny lalao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » OpenTomb, Tomb Raider maimaim-poana ho an'ny Ubuntu
Canonical dia mamoaka fanavaozana ny fiarovana ho an'ny Ubuntu 14.04 LTS sy 16.10 Linux Kernel